nataon'ny admin tamin'ny 21-05-24
Na orinasa mitana ny patanty ianao na orinasa mandray ny vokatra manomboka amin'ny foto-kevitra mankany amin'ny fanatanterahana, ny fahitsiana sy ny fahitsiana no zava-dehibe indrindra amin'ny fampiharana Fanamboarana Fitaovana. Ny kalitaon'ny vokatra farany tsara indrindra dia manatsara ny fotoana amin'ny tsena sy ny fahafaham-pon'ny mpampiasa farany, izay mahasoa ho an'ny ...
Fittings fitaovana fanamainana solika sy entona
Ny indostrian'ny solika sy ny entona no fototry ny fiaraha-monina maoderina. Ny vokatra ao aminy dia manome angovo ho an'ny mpamokatra herinaratra, manafana trano, ary manome solika ho an'ny fiara sy fiaramanidina hitondrana entana sy olona eran-tany. Ny fitaovana ampiasaina amin'ny fitrandrahana, fanadiovana ary fitaterana ireo ranoka sy entona ireo dia tsy maintsy mijoro amin'ny asa mafy ...
Ny tombon-dahiny amin'ny fanodinana simika Satria miasa isan'andro ny trano famokarana simika, dia mifandray tsy tapaka amin'ny akora mando, caustic, abrasive ary asidra ny tampon'ny fitaovana. Ho an'ny dingana manokana dia tsy maintsy mahazaka hafanana mafana na mangatsiaka be izy ireo ary mora ...